Ny Forum Beijing-Tokyo faha-17. Fiaraha-miasa nomerika vaovao eo amin'i Shina sy Japana
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ny Forum Beijing-Tokyo faha-17. Fiaraha-miasa nomerika vaovao eo amin'i Shina sy Japana
Ny Forum Beijing-Tokyo faha-17 dia natao ny 25 ka hatramin'ny 26 Oktobra tany Beijing sy Tokyo an-tserasera sy ivelan'ny aterineto miaraka.
Nampiantranoin'ny China International Publishing Group (CIPG) sy ny Genron NPO tsy mitady tombony Japoney, ireo mpandray anjara avy amin'ny firenena roa tonta dia nizara hevitra ary nanao fifanakalozan-kevitra lalina momba ny toekarena nomerika, ny faharanitan-tsaina (AI), ny fiaraha-miasa ara-toekarena sy ara-barotra, ary fifanakalozana ara-kolontsaina nandritra ny dinika roa andro.
Tao amin'ny seha-pifanakalozan-kevitry ny Forum Beijing-Tokyo faha-17 tamin'ny 26 Oktobra, samy nanao fifanakalozan-dresaka am-pahatsorana sy lalina momba ny fahatsinjovan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny roa tonta eo amin'ny fiarahamonina nomerika sy AI ny manam-pahaizana Shinoa sy Japoney, ary nahatratra ny marimaritra iraisana momba ireo olana mifandraika amin'izany.
Ny fiaraha-miasa nomerika Sinoa-Japoney dia manana fanantenana lehibe
Xu Zhilong, lehiben'ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny Science and Technology Daily dia nilaza tao amin'ny forum, "Ny fampivoarana ny toekarena nomerika dia tsy ny fampivoarana ny teknolojia na ny vokatra nomerika fotsiny, fa ny fananganana rafitra ara-tontolo iainana amin'ny toekarena nomerika."
Tatsuo Yamasaki, mpampianatra malaza ao amin'ny Oniversite Iraisam-pirenena momba ny Fahasalamana sy ny Fifanampiana dia naneho ny fanantenany fa ity sehatra ity dia afaka mikaroka vahaolana amin'ireo olana mahakasika ny fiaraha-monina miaraka amin'ny hoavy iombonana ho an'ny olombelona, ​​​​toy ny fikarakarana ny zokiolona amin'ny fiaraha-monina efa antitra, ny toetr'andro mahavelona AI. fanovana fanaraha-maso, fanaraha-maso ny dian-tongotra karbona amin'ny alàlan'ny teknolojia AI, fampihenana ny fanjifana angovo, ary fampidirana angovo nentim-paharazana amin'ny teknolojia vaovao.
Pang Dazhi, filoha lefitry ny NetEase dia mino fa ny taranaka tanora ao Shina sy Japana dia mifankahalala amin'ny alalan'ny vokatra nomerika, toy ny animation, lalao, mozika ary sarimihetsika. "Raha ny marina, mifototra amin'ny lova ara-kolontsaina mitovy sy ny teknolojia mifameno tanteraka amin'ny fampandrosoana ny lalao, ny firenena roa dia manana sehatra malalaka amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny kolontsaina nomerika sy ny toekarena nomerika."
Fironana sy toe-javatra vaovao momba ny toekarena nomerika
Duan Dawei, filoha lefitra zokiolona ao amin'ny iFLYTEK Co.Ltd. Nilaza izy fa misy toerana lehibe ho an'ny fiaraha-miasa eo amin'i Shina sy Japana eo amin'ny sehatry ny AI. “I Shina sy Japon dia miatrika fanamby mahazatra eo amin'ny fanabeazana, ny fitsaboana, ny fikarakarana ny zokiolona ary ny faritra hafa. Noho izany, afaka miresaka momba ny fomba hanomezana serivisy tsara kokoa ho an'ny daholobe amin'ny alàlan'ny teknolojia AI isika. ”
Taro Shimada, VP Senior an'ny orinasa Toshiba, dia nilaza fa ny fampiasana ny angon-drakitra momba ny lozisialy dia marefo amin'ny loza voajanahary. "Na i Shina na i Japon dia samy manolo-tena hanatsara ny hamafin'ny rojo famatsiana amin'ny alàlan'ny teknolojia siantifika. Manoloana ny fahatafintohinana amin'ny COVID-19, ny angon-drakitra momba ny logistika dia manolotra fotoana sy fanamby. Tonga ny saina mahazatra amin'ny fizarana angon-drakitra momba ny lozisialy, mampiroborobo ny fampiasana ny angona lozistika mankany amin'ny ambaratonga vaovao. "
Jeff Shi, filoha lefitry ny SenseTime, dia nilaza fa ny AI dia afaka manampy amin'ny famahana ny olan'ny fahanterana atrehan'i Shina sy Japana, miatrika ny fanamby azo ampiharina amin'ny tsy fahampian'ny vokatra. "Ny AI dia afaka manampy amin'ny famahana ny tsy fahampian'ny vokatra. Mandritra izany fotoana izany, ny AI mihitsy dia miezaka manatsara ny vokatra amin'ny fampihenana ny fiankinany amin'ny angona sy ny olombelona. "
Ny "Zero carbonisation" dia mahazo vahana amin'ny alàlan'ny toekarena nomerika
AI dia manampy amin'ny famolavolana fitaovana vaovao toy ny catalysts vaovao, hoy i Junichi Hasegawa, COO an'ny Preferred Networks. “Ny angovo photovoltaic, hydraulique ary hydrogène dia resahina matetika momba ny angovo, fa izy rehetra dia avy amin'ny angovo faharoa. Noho izany, tsy azo ihodivirana ny famoahana karbaona amin'ny famokarana ireo angovo vaovao ireo ary ny fomba fampihenana ny entona karbônina amin'ny famokarana ireo angovo ireo dia olana lehibe. "
Ankoatra izany, ny fiaraha-monina olombelona dia tsy afa-misaraka amin'ny ordinatera. Ny fomba fampihenana ny fanjifana herinaratra ao amin'ny foibe angon-drakitra ao aminy sy ny fampivoarana solosaina vaovao miaraka amin'ny fahaiza-manao ambony kokoa ary tsy dia misy emission ihany koa dia mendrika eritreretina.
"Nihena 7 isan-jato ny totalin'ny entona karbaona eran-tany tamin'ny 2020 raha oharina tamin'ny taona teo aloha noho ny valan'aretina COVID-19," hoy i Liu Song, filoha lefitry ny Pingkai Xingchen (Beijing) Technology Co.Ltd., "Na izany aza, ny hetsika ara-toekarena dia nahomby. tsy miato, ny antony dia ny fampivoarana mafy ny toekarena amin'ny Internet.”
Nilaza i Liu fa ny hetsika an-tserasera dia afaka mampihena be ny famoahana karbaona ary miantoka ny fampandrosoana ara-toekarena ara-dalàna. Mety hitady lalana vaovao amin'ny fitsitsiana angovo sy fampihenana ny entona amin'ny alalan'ny fampiasana, fampitana ary fitahirizana angon-drakitra amin'ny ho avy isika.
Mifantoka amin'ny fiarovana ny angon-drakitra sy ny fiarovana
Hiromi Yamaoka, mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny orinasa Future, dia nilaza fa ny fampandrosoana ny AI dia mila mamaha ny olana momba ny fanangonana tsiambaratelo. "Ny fampiharana ny AI dia mitaky fanangonana angon-drakitra avo lenta, izay misy ny lafiny fitantanana ny angon-drakitra, fiarovana ny fiainana manokana ary olana hafa. Amin'ny dingan'ny fampivoarana AI dia tokony hovahana ireo olana. Fanampin'izany, raha ny momba ny fikorianan'ny angon-drakitra miampita sisintany, ny firenena manerana izao tontolo izao dia tokony hanao marimaritra iraisana mba hiantohana ny fiarovana ny fikorianan'ny angon-drakitra, "hoy izy.
Nizara hevitra momba ity lohahevitra ity ihany koa i Liu, nilaza fa mila faritana mazava tsara ny fetran'ny fiarovam-pirenena sy ny fiainana manokana manokana. Nijery ny fifandraisan'ny tenim-paritra eo amin'ny fampandrosoana sy ny fiarovana ny fikorianan'ny data i Shina.